IiHacks zokwenza iividiyo zakho zikaYouTube zihambelane neentsholongwane-YTpals
Thenga Abalandeli be-Twitter
IiHacks zokwenza iividiyo zakho zikaYouTube zihambelane neentsholongwane
Xa kuziwa kumaqonga okusasaza ividiyo, akukho nkulu ngoku ngeli xesha kuneYouTube. Iqonga livumele abaqulunqi bomxholo ovelisa izinto ezintsha ukuba bazigcine besenza into abayithandayo, kwaye baqinisekile ukuba baya kuhlala bekhupha umxholo omninzi kumaxesha azayo. Nangona kunjalo, ukuba ungumdali omtsha osekwe kwiYouTube, kuya kuba nzima kuwe ukuba uzenzele ngaphandle kwethamsanqa.
Ukubeka nje, enye yeevidiyo zakho kufuneka ihambe ngentsholongwane ukuze uqale ukuqokelela ababukeli kunye nababhalisile ngokukhawuleza. Kule post, siza kwabelana nawe ezinye zezona hacks zikaYouTube zibalaseleyo onokuzisebenzisa ukwandisa amathuba okuba iividiyo zakho zihambe zintsholongwane. Ke, ngaphandle kokulibazisa, masiqalise.
1. Yenza ividiyo ngesihloko esiphikisanayo
Kwihlabathi lanamhlanje, alukho usuku oluhamba ngaphandle kwempikiswano, kwaye abantu abaninzi emhlabeni jikelele bathanda ukusebenzisa umxholo ophikisanayo. Ke, ukuba okuphambili kwakho kukwenza ividiyo yeYouTube, khetha isihloko esinempikiswano esifanelekileyo kubaphulaphuli bakho. Ukuba ividiyo yakho yenziwe kakuhle, akukho sizathu sokuba ingaqokeleli iimbono ezininzi ngexesha elifutshane.
2. Yenza izihloko ezinomdla kunye ne-thumbnails
Isihloko sevidiyo yakho kunye ne-thumbnail zizinto zokuqala ezimbini eziya kubonwa ngababukeli kuYouTube. Yiyo loo nto kufuneka wenze umzamo othile wokwenza izihloko ezizodwa kunye ne-thumbnails enomtsalane. Xa usenza izihloko, zive ukhululekile ukuya kwi-clickbait-type izihloko. Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba isihloko asibalahlekisi abaphulaphuli. Uninzi lwabasebenzisi beYouTube bahlala besenza impazamo yokubhala izihloko ezingahambelani neevidiyo zokwenyani. Ukuba wenza okufanayo, abaphulaphuli bakho abayi kukuthemba. Ngokuqinisekileyo, eli qhinga linokubangela iimbono ezininzi kwiividiyo ezimbalwa, kodwa ekuhambeni kwexesha aliyi kusebenza kakuhle ekugcineni abaphulaphuli bakho.
3. Yenza uphando lwakho lwegama elingundoqo ngaphambi kokubhala izihloko kunye neenkcazo
Ukuphuculwa kwe-injini yokukhangela (SEO) idlala indima enkulu ekubeni iividiyo zakho ziyafumaneka na kuYouTube nakuGoogle. Nangona kunjalo, uninzi lwabasebenzisi be-YouTube abahoyi ingqalelo kwi-SEO kwaye banamathele ekubhaleni izihloko kunye neenkcazo ngaphandle kokubandakanya amagama okukhangela kunye namabinzana. Ke, khumbula ukwenza uphando lwegama eliphambili ngaphambi kokubhala izihloko zakho kunye neenkcazo. Kwakhona, ukuba ungumntu omtsha we-YouTuber ongenalo ukulandelwa okubonakalayo eqongeni, kungcono ukujolisa amagama angundoqo anokhuphiswano oluncinci. Ukuba unako ukuyihlawula, sincoma ukuqesha i-arhente ye-SEO yobungcali ukwenza uphando lwegama elingundoqo egameni lakho.
4. Yenza uninzi lweebhulukhwe ezimfutshane zikaYouTube
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, iividiyo ezimfutshane ziye zalawula iividiyo ezinde malunga nokujonga. I-TikTok iguqule indlela iividiyo ezimfutshane eziboniswa ngayo kwaye zijongwe, kwaye ngoku, uninzi lwamaqonga osasazo lwevidiyo afake amanqaku afana neTikTok. Umzekelo, i-Instagram inomsebenzi wayo weReels, ngelixa iYouTube yazisa iiShorts. Ke, kuya kufuneka uphinde ulayishe umxholo wefomu emfutshane amaxesha ngamaxesha ukonyusa amathuba akho okuhamba ngentsholongwane eqongeni.
5. Layisha izihlokwana kubaphulaphuli bangaphandle
Ukuba ufuna abantu abavela kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi bazibandakanye neevidiyo zakho, kufuneka ubandakanye imibhalo engezantsi kwividiyo. Ngelixa iYouTube inesihlokwana esizenzekelayo, ukuchaneka kwayo kuyathandabuzeka. Umzekelo, ukuba wenza ividiyo enokubanakho ukwenza kakuhle kumazwe angaphandle, fikelela kumntu oyingcali oyincutshe ekongezeni izihlokwana. Ngokuqinisekileyo, kunokufuna ukuba uchithe imali ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, ukuba ividiyo yakho yenziwe kakuhle, akukho sizathu sokuba ungayifumani loo mali.
Ke, ngoku usazi ezinye zezona hacks zikaYouTube zibalaseleyo zokwenza iividiyo zakho zihambelane neentsholongwane, lixesha lokuthatha amanyathelo anokuthathelwa amanyathelo ngokusekwe koko sabelana ngako nawe. Ukuba ujonge ababhalisi abaninzi, qwalasela iinkonzo ezibonelelwa kwiYTpals. Kwi-YTpals, abadali bomxholo weYouTube banokufumana Ababhalisi bamahhala be-YouTube, iimbono kunye nezinto abazithandayo zokukhulisa ijelo labo likaYouTube.
IiHacks zokwenza iividiyo zakho zikaYouTube zihambelane neentsholongwane ngababhali beYTpals, 18 Novemba 2021
Nantsi indlela i-YouTube efuna ngayo ukuba ilwe neNgcaciso engeyiyo ngePaneli yokuKhangela yeNyaniso
Ukuqhambuka kwe-COVID-19 kulithathe lonke ilizwe ngoqhwithela. Kunzima ukucinga imeko apho isifo esinye sinokuthi sityhale abantu ngaphakathi kwaye sibangele ukuba ingeniso yeshishini ibethe lonke ixesha. Njengabantu baziva ...
Uyenza njani intengiso esebenzayo yeYouTube ngexesha leholide?
Ubhubhane we-COVID-19 ungenise indlela entsha yokuphila yabantu, ngakumbi kwabo bafuna ukuzonwabisa kwindawo ekwi-Intanethi. IYouTube, injini yokukhangela yesibini ngobukhulu emva kwenkampani yomzali kaGoogle, iye yaba yi…
Uqhuba njani iphulo lokunyusa imali kwiYouTube?
Ukunyusa ingxowa mali kunokuba yinkqubo ende neyindinisa xa kusenziwa ngaphandle kocwangciso olwaneleyo. Nangona kunjalo, akusoloko kunjalo. Iphulo elicwangciswe kakuhle lokunyusa ingxowa yeYouTube liza kutsala abantu kwaye liqinisekise ukuba…
Uzenza njani ezona Hashtag zininzi ukuze wongeze umxholo wakho weYouTube
Izicwangciso zeYouTube eziBalulekileyo kwiMpumelelo yesitishi sakho
Izinto omawuzithathele ingqalelo xa uQalisa isitishi sikaYouTube ngokuQala kwakho
Ungawaphatha njani amagqabantshintshi angafanelekanga kuYouTube?
Uzenza njani iividiyo eziBandakanyileyo kubaBhalisi bakho be-LGBTQIA bakaYouTube
inkonzo Ababhalisi be-YouTube be-50 (i-$ 20) Ababhalisi be-YouTube be-100 (i-$ 30) Ababhalisi be-YouTube be-300 (i-$ 45) Ababhalisi be-YouTube be-500 (i-$ 60)
Sisebenzisa ii-cookies ukuqinisekisa ukuba sikunika amava afanelekileyo kwiwebsite yethu. Ukuba uqhubeka usebenzisa le ndawo siya kuthatha ukuba uyavuya ngayo.Ngenisaumthetho wabucala